Jooji Dabeecadda Dhibaatooyinka leh Muuqaalka
Waa muhiim inaad joojiso gaadiidka xun ee kaa hor istaagaya inaad gaarto goobtaada oo aad muujiso fikrado been abuur ah oo ku jira Google Analytics. Ugu horreyntii, waa inaad fahamtaa haddii gaadiidkaaga uu ka yimid Google ama bots ayaa ku lug leh. Haddii aad aragto koror lama filaan ah ee baabuurta, waxaa jira fursado aan sharci ahayn maadaama aad si haboon u sameysnayd SEO-ga - santiago chile vacation packages. In Google Analytics, waa inaad soo booqataa qaybta Gaadiidka Gaadiidka iyo hubi tayada gaadiidka iyo sidoo kale cinwaanada IP. Rikoodhada webka, robotyada ama farsamoyaqaanada cusub: waxaad ku magacaabi kartaa wax kasta laakiin ma iska indha tiri karaan xaqiiqda ah in software isticmaala World Wide Web sida aadanaha dhabta ah. Nasiib darro, wax faa'iido ah uma keenaan boggaga internetka oo kaliya iska dhig inaad u dhaqanto sida dadka, ku siinaya aragtiyo badan. Dhinaca kale, waxaa suurtogal ah in qofna uusan awood u laheyn inuu baabuur badan ku wado website-ka sababtoo ah tartanka sare. Waxaa laga yaabaa inaad ku soo afjarto dadaalkaaga adoo haysta khariidado muujin kara boggaaga natiijooyinka raadinta . Google waxay eegtaa oo keliya oo kaliya oo ku xiran xiriiro iyo bogag kuwaas oo siiya dadka isticmaala macluumaadka dhabta ah iyo dhabta ah. Haddii aad haysatid baashaal badan oo u eg bini-aadanka dhabta ah, waa inaad raadisaa xalka xalalka ka jira meelaha waxqabadka anti-spam inta badan laga doodo. Iyo haddii aad ka daalan tahay robotyada aan la arki karin, bots and tricks ayaa loogu talagalay in ay bixiyaan bogga aragtida, hits been abuur ah, iyo waliba laga yaabo in la isku xiro xiriirinta, adiga oo aan kuu ogolaanin inaad dhaliso dhabta dhabta ah
Mahadsanid, waxaa suurtogal ah in laga takhaluso bots iyo spam adoo maskaxda ku haya waxyaabo yar oo muhiim ah. Marka la eego, Max Bell, oo ah Semt Maamulaha Guusha ee Macaamilka, wuxuu ku siinayaa inaad tixgeliso talooyinka soo socda:
Waxaad fahmi kartaa dhibaatada dhabta ah ee qoryaha kaliya marka la tixgelinayo tusaalooyinka qaar..Tusaalaha ugu horeeya waa in haddii aad haysato boogaha Google, kuwani waxaa badanaa loogu talagalay in ay ku siiyaan boggaga aadanaha sida muuqaalka ah. Waxa kale oo laga yaabaa inaad ku haysato khariidado loo qoondeeyay inay kugu qasbaan inaad cusboonaysiiso bogagga shabakaddaada. Labadaba iyaga ayaa booqanaya boggagaaga, kor u qaadista taraafikada iyo falanqaynta falanqaynta. Waxay leeyihiin heer aad u sarreeya oo ay ku qaataan wakhti yar bogagga shabakadda. Farqiga kaliya ee u dhexeeya labadan garab ayaa ah in gawaarida Google ay sameeyaan wax faa'iido leh, quudinta xogta dib-u-eegista boggagaaga, halka qalabkii cusboonaysiinta ay kudhufaan tirakoobyadaaga taraafikada si aad u sarreeya, barnaamijyada aad ku xiran tahay khatarta. Sidaa daraadeed, waa mid aad u muhiim ah in la aqoonsado dhererka iyo ka hortaga sida ugu dhaqsaha badan. Uma baahnid inaad wax badan sameyso maaddaama Google Google ay bixiso barnaamijyo iyo qalab badan si aad shaqadaada u fududeyso. Spammers ayaa xiran kara barkood mararka qaarkood, laakiin xannibaadda dhinacaaga waa inay ahaataa mid joogto ah natiijooyinka wanaagsan.
Xayiraadda Gaadiidka aan loo baahnayn
Waxaad xakameyn kartaa gawaarida aan loo baahnayn ee feylasha .htaccess. Haddii aad xakameyso bokiska faylashaas, waxaad awoodi doontaa inaad hagaajiso waxtarka guud ee boggaaga. Isticmaalida habkani, waxaad xakameyn kartaa xarkaha la aqoonsan karo oo loo yaqaano spambots. Haddii rinjiga loo yaqaan 'user users', waxaad ka fiican tahay inaad xakamayso cinwaankooda IP-da sida ugu macquulsan. Kama horjoogsan kartid dhammaan kabaha ilaa aad ka gooysid cinwaankooda IP-da oo ay hagaajinayaan goobaha aad martigelisay.
Hab kale ayaa xakameynaya xargaha iyada oo la adeegsanayo faylashaada .htaccess. Waxaa sidoo kale muhiim ah inaad xannibo cinwaanka IP-ga sida ugu macquulsan, ama u bedel cinwaanada IP-ga ee leh nabadgelyada. Haddii aad tahay qof isticmaala WordPress, waa inaad xakameysaa khadka baaskiilka xun sababtoo ah tan waa aaladaha halka khariidaduhu ku weeraan faylasha tiro badan. Waxaad ku dari kartaa faylkaaga .htaccess faylkaaga, waxaadna ku dhejin kartaa qawaaniin kala duwan si aad ugu badbaado internetka.